Kevin Lynch anova mukuru weApple Car kusimudzira | Ndinobva mac
Ignacio Sala | 10/09/2021 20:00 | Noticias, Apple zvigadzirwa
Mazuva mashoma apfuura, takakuzivisa nezvekuenda kweumwe wemisoro yeApple Car, Doug munda, kwakanangana neFord. Maererano neBloomberg, Apple yanga ichikurumidza kuzadza nzvimbo iyi, Kevin Lynch ari iye munhu akasarudzwa kuita chirongwa ichi kuburikidza nevanhu vazhinji vakatopfuura.
Kevin Lynch, akatanga kushanda kuApple muna2013 uye aive mumwe wevaya vane chekuita nekushanduka kweApple Watch mumakore achangopfuura. Muna Chikunguru, Akave chikamu cheiyo Titan chirongwa, ichitarisa chiitiko chayo pakuvandudzwa kweApple Car.
Bloomberg yakaratidza mazuva mashoma apfuura kuti kuenda kwaDoug kwaive chiratidzo chekuti Apple mota kuvandudza ichiri mumatanho ayo ekutanga, saka ngatirege kutarisira Apple Car munguva pfupi.
Izvi zvinokonzerwa nenhoroondo yecheki yeprojekti iyi, chirongwa icho mumakore achangopfuura chakachinja hutungamiri, kuyedza kudyidzana nevamwe vagadziri, kudzingwa kwemainjiniya ... kufamba kwakaramba kuchinonoka kuvandudzwa kwemotokari yekuzvityaira yemagetsi iyo Apple inoronga kuvhura.
Kevin akatanga kushanda pachirongwa ichi kutanga kwegore rino, paakatora zvikwata zvinotarisira software iri pasi. Iye zvino arikutarisira boka rese, iro zvakare rinosanganisira Hardware engineering uye kushanda pama sensors emota dzinozvityaira, vakadaro vanhu, avo vakabvunza kuti varege kuzivikanwa nekuti kufamba uku hakusi kwevanhu.
Kusarudzwa kwaLynch kutungamira chirongwa chemotokari kunoratidza kuti yakawanda yekambani inoramba ichitarisa pasoftware yepasi uye tekinoroji yekuzvityaira, panzvimbo pemakanika epanyama emotokari. Lynch anga ari software executive kwemakumi emakore, kwete mumwe munhu anotarisira zvikwata zvehardware. Zvakare, haasati amboshanda mukambani yemotokari.
Uku kufamba kweApple kuri kurova, nekuti pakati pevashandi vanoshanda paApple Car, pane vanhu vanoverengeka vane ruzivo munharaunda yemotokari, chiitiko icho Kevin Lynch chisipo zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kevin Lynch anova mukuru weApple Car budiriro
VMWare Fusion inogadzirira kuenderana neApple M1s